नेपाली सेना ‘भारतीय नेपाली सेना’ हो – Ekathmandunepal
Homeजीबन शैलीनेपाली सेना ‘भारतीय नेपाली सेना’ हो
६ फाल्गुन २०७४, आईतवार १४:५१ ekathmandu Nepal जीबन शैली 0
भारतले सिमाना मिच्दा केही नबोल्ने नेपाली सेनाको काम छैन, खारेज गरिदिए हुन्छ । कालापानीमा १९६२ देखि निरन्तर भारतीय सेना बसिरहेको छ । तै पनि नेपाली सेनाले केही गर्न सकिरहेको छैन । भारतीय सेनालाई त्यहाँबाट हटाउनको लागि नेपाल सरकारसँग आदेश माग्नुपर्यो । ‘मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेर हामीलाई नखटाएसम्म हामी जाँदैनौं ‘ सेनाले भन्ने होइन भन्दै खरो विचार प्रस्तुत गर्ने ग्रेटर नेपालका अभियन्ता प्राध्यापक फणीन्द्र नेपालसँग सेना दिवसको अवसर पारेर गरिएको कुराकानीः
सन्दर्भ नेपाली सेना दिवस परेको छ, अहिलेको स्थितिमा नेपाली सेनाको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ?
ऐतिहासिक रुपमा हामीले नेपाली सेनाको सम्मान गर्दै आएका छौं । तर पछिल्लो विकाशक्रम हेर्दा नेपाली सेनाले नेपाली जनताले अपेक्षा गरेअनुसारको भूमिका खेल्न सकेको छैन् । राजतन्त्र रहुञ्जेल नेपाली सेनालाई शाही नेपाली सेना भनिन्थ्यो । गणतन्त्र आएपछि नेपाली सेना भनियो । तर म चाहिं के भन्छु भने यो ‘भारतीय नेपाली सेना’ हो ।
कसरी, तपाईंको मतलब के हो ?
अहिले भारतसँग निकट सम्वन्ध छ । दुवै देशका प्रधानसेनापति एक अर्काे देशको मानार्थ प्रधानसेनापति हुन्छन् जबकि नेपालको भूभाग कालापानीमा १९६२ देखि निरन्तर भारतीय सेना बसिरहेको छ । खै नेपाली सेनाले चासो दिएको ?
भारतीय सेनाका प्रमुख यसपटक सेना दिवसका दिन प्रमुख आतिथ्य ग्रहण गर्न काठमाडौं आएका छन्, यसले के संकेत गर्न खोजेको जस्तो लाग्छ ?
शंका गर्ने सुविधा त जसलाई पनि प्राप्त हुन्छ । सम्मान दिने हिसावले नेपाली सेनाको सम्मानित पदमा मानार्थ महारथी दिइएको छ । दुवै देशका सेना प्रमुख एक अर्काको मानार्थ प्रधानसेनापति हुने भनेपछि त उनलाई पनि त्यहि सन्दर्भमा निम्ता गरिएको हुनुपर्छ ।
जसरी तपाईले आशंका गर्नुभयो नि, भारतीय सेनाले नेपालीभूमि कब्जा गरेर बसेको देख्दादेख्दै नेपालीले सेना त्यहाँबाट हटाउनु पर्यो भन्दैन । सरकारसँग आदेश कुरेर बस्छ ।
सुनिन्छ, ‘मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर नखटाएसम्म हामी जाँदैनौं रे’ । एउटा घटना स्मरण गराउन चाहन्छु कि एकपटक भारतीय सेना अवैध रुपमा बङ्लादेशमा प्रवेश गर्यो ।
अन द स्पट १६ कि १८ जना भारतीय सेनालाई बङ्लादेशी सेनाले मारिदियो । भारतले केही पनि गर्न सकेन । आफ्नै आमामाथि प्रहार हुँदा पनि आदेश पर्खेर बस्ने ? घरमा चोर, डाँका वा लुटेरा आयो भने के अब गाउँपालिकाको अध्यक्षलाई पर्खेर बस्ने ? कि रक्षा गर्ने ? त्यसकारण, मैले यो सेना भारतीय नेपाली सेना हो भनेको हुँ । नेपाली सेनाले अहिले खेलिरहेको भूमिकामा मेरो आपत्ति छ । हाम्रो करबाट चलेको सेनाको प्रमुख दायित्व भनेकै मुलुकको रक्षा गर्ने हो । जुन सेनाले नेपाली भुभागको रक्षा गर्दैन, त्यो सेना हामीलाई किन चाहियो ?
यसरी सेनाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउन मिल्छ ?
प्रश्न उठाउन किन नमिल्नु । उहाँहरु सच्चिनु पर्यो । ऐतिहासिक रुपमा सेनाले खेलेको भूमिकामाथि म मात्र होइन, आज विश्व नै नतमस्तक छ । नेपाली सेनालाई विश्वभर सम्मान छ । त्यस्तै भूमिका मुलुकमा पर्दा खेल्नु पर्यो नि त । यहिँबाट गएको नेपाली सेनाले भारतलगायतका विदेशीभूमि बचाइदिने अनि भारतीय सेना नेपालमा घुस्दा चाहिं नेपाली सेना मासु भात खाएर बस्ने ? सरकारको आदेश कुरेर बस्ने ?
भारत ठूलो देश भएको मनोविज्ञान र सेनालाई आवश्यक सैनिक सामाग्री त्यहिँबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता पनि त छ :
त्यस्तो बाध्यता छैन, भारतीयभूमिबाट हतियार ल्याउँदा मात्र छ । हामीले बेल्जीयम, इजरायल, अमेरिका वा अन्य देशबाट पनि हतियार किन्न सक्छौं नि । पैसा तिरेर किन्ने कुरा हो । हामी स्वतन्त्र मुलुक हौं भने भारतसँग नभएको हतियार हामीले प्रयोग गर्नुपर्यो । हामीले उसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने विश्वभर चलेको अत्याधुनिक हतियार ल्याउनु पर्यो ।
हैन, खाली ‘शो’ को लागि मात्र सेना राख्ने हो भने नेपाली सेनासँग खुकुरी छ, त्यहि लिएर बसे भइहाल्यो । त्यो त पहिले आफुले आफैंलाई चिन्नु पर्यो नि । भारतले उत्पादन गरेको नपड्किने इन्सास हतियार अधिकांश नेपाली सेनाको हातमा छ । यसबाट कसरी नेपाली सेनाको सवलीकरण हुन्छ ?
संख्याकोे हिसाबले नेपाली सेना निकै कम छ, भारतसँग अध्याधुनिक हतियार पनि छ, यस्तो अवस्थामा भारतसँग नेपाली सेना लड्न सक्षम छ त ?
एउटा इजराली सेना बराबर एक सय अरवियन सेना गनिन्छ । त्यो क्षमता, युद्धकला विकास गर्नु पर्यो नि त । हतियारले मात्रै युद्ध लड्ने हो र ? अत्याधुनिक हतियार दिएता पनि मार हान्ने बेला हात कमाएर बस्यो भने त्यो सेनाको के काम ? हो, युद्ध जित्न हतियार चाहिन्छ, तर त्यो भन्दा पहिला हतियार प्रयोग गर्ने शाहस चाहिन्छ ।
लडाईं त शाहसले मात्र जितिन्छ । गतिलो हतियार दिएर पनि मन थरथर काम्छ भने त्यो हतियारको के काम ? मैले मुलुकका लागि लड्नुपर्छ, म मुलुकको लागि मेरो ज्यान समर्पित गर्न आएको हुँ, मेरो रगत बगोस्, डराउँदिन तर दुश्मनको रगत बगाउनु परे पनि पछि पर्दिन भन्ने शाहसको साथ जुन व्यक्ति वा सेना हिँड्छ, उसले लडाईं अवश्य पनि जित्छ । भारतको सेना २० औं लाख छ, हामी एक लाखले के गर्न सक्छौं ? भन्दै बस्ने हो भने किन नेपाली सेनामा जागिर खाने ?
तपाईको मतलब कम्तीमा नेपालीभूमि त रक्षा गर्नु पर्यो नि भन्ने हो ?
हो । त्यो दायित्व बोकेर आएको सेनाले सपथ खाएको छ नि त । तर दुर्भाग्य नेपालको सैनिक ऐनमा प्रधानसेनापति भएपछि जुन सपथ खुवाइन्छ, त्यो सपथमा यो मुलुकको म रक्षा गर्छु भन्ने कतै छैन । संसारमा त्यस्तो कुनै पनि मुलुक छैन, जुन मुलुकले आफ्नो सेनालाई मुलुकको रक्षा गर्ने दायित्वबाट बन्चित गरेको होस् । नेपाल मात्र त्यस्तो एक मुलुक हो, जुन मुलुकको सेनाले आफ्नो मातृभूमि रक्षा गर्नु पर्दैन ।
पछिल्लोपटक नेपाली सेनालाई लोकतान्त्रिकरण गर्ने अभियान नै चलेको छ, अनि प्रमुख बनाउने नाममा राजनीतिको घुसपैठ हुन थालेको छ, के भन्नु हुन्छ ?
यो ठूलो गल्ती हो । सेनाको लोकतान्त्रिकरण हैन, सवलीकरण गर्नुपर्छ । सेनालाई राजनीतिबाट मुक्त राख्नुपर्छ । सवैभन्दा शक्तिशाली हतियार दिनुपर्यो ।
थोरैको संख्यामा छौं हामी, धेरै शक्ति आर्जन गर्न सक्ने हुनुपर्यो । आक्रमण नगरे पनि कमसेकम रक्षात्मक बन्नुपर्छ नि । बाहिरी आक्रमणबाट बच्नका लागि सवल हुनुपर्यो नि ।
के त्यो ढंगमा सेना गएको छ ? कटवाल प्रकरणपछि सेनामा राजनीतिकरण सुरुवात भएको छ । त्यो घटनाबाट पहिलोपटक के थाहा भयो भने नेपाली सेना भारतबाट सञ्चालित रहेछ ।
बाहिर के आयो भने कटवाललाई बचाउन भारतीय सेनाले समेत आफ्नो प्रभाव प्रयोग गर्यो । अहिले नेपाल प्रहरी, सशस्त्रमा जस्तै नेपाली सेनामा पनि भावी नेतृत्व कसले लिने भन्ने विषयमा नेताहरुकोमा धाउने प्रवृत्ति सुरु भएको छ । यो नितान्त गलत कुरा हो । तत्काल सच्चिनुपर्छ ।
पछिल्लो समय व्यापार र ब्यवसायतिर लागेको भन्दै नेपाली सेनाको तीब्र आलोचना हुँदै आएको छ, यहाँको धारणा के छ ?
सेनाको यो कदममा म कतिखेर सहमत हुन्थेँ भने सेनाले आफ्नो हतियार आफैं खोलोस्, कारखाना आर्फै बनाओस्, सरकारसँग सवलीकरणका लागि बजेट माग गरोस्, संचयकोषमा भएको रकम हामी पनि लगानी गर्छौं, हाम्रो लागि आवश्यक गोलीगोठ्ठा नेपालमै उत्पादन सुरु गरौं भन्दै अरुको मुख ताक्ने प्रवृत्ति बन्द गरोस् ।
सेनाले त्यसका लागि ब्यवसाय वा ब्यापार गरेको भए त्यो पनि ठिक थियो । सैनिक कल्याणकारी कोषमा जम्मा भएको रकम शान्ति सेनाबाट फर्किएका सिपाहीको रगत पसिना हो । यो सेना मुलुक रक्षाका निमित्त बनाइएको हो । मुलुकको रक्षा गर्न छोडेर पैसाको खेलो गर्नतिर सेना लाग्छ भने नेपाली जनतालाई त्यो कदापि सह्य हुन्न । त्यो सरासर गलत हो ।
नेपाली सेनाले शासन सत्ता लिनुपर्छ, त्यो भयो भने मुलुक राम्रो हुन्छ भन्नेहरुको कमि छैन, के त्यो संभावना देख्नुहुन्छ ?
सेनासँग हतियार छ । सेनाले चाहेको खण्डमा कुनै पनि समय शासन सत्ता हातमा लिन सक्छ । तर, सेनाभित्र पनि भष्टीकरण सुरु भइसकेको छ । उनीहरुले शासन सत्ता चलाउन सक्छन् भन्नु एतिहासिक प्रमाण छैन ।
त्यसकारण सेनाले लिँदा राम्रो हुन्छ भन्ने एउटा स्वार्थी गुटको कथन मात्र हो । यसमा अर्को तर्क पनि हुनसक्छ, पहिला नेपाली सेना राजाको मातहत थियो, सेना आयो भने राजालाई स्थापित गराउँछ भन्ने। तर संविधानले त्यो गर्न सेनालाई दिँदैन, र त्यो संभव पनि छैन ।
अन्त्यमा, नेपाली सेनाको भूमिका कस्तो हुुनुपर्छ जस्तो लाग्छ ?
मेरो एउटै आग्रह छ, नेपाली सेनालाई । छाउनीमा ग्रेटर नेपालको तस्बिर राखिएको थियो । अहिले त्यो हटाइयो कि छ त्यो मलाई थाहा छैन । र, त्यो विशाल नेपाल नेपाली सेनाले नै निर्माण गरेको हो, त्यसमा कसैको दुईमत छैन । विशाल नेपालको तस्बिर राख्ने सेनाले कमसेकम मेची र महाकालीमा भएका भारतीय अतिक्रमणलाई नियन्त्रण गर्नु पर्यो नि ।
नेपाली सेनाले ऐनामा आफ्नो अनुहार हेरेर आत्मलोचना गर्नु पर्यो कि हामीलाई के दायित्व दिइएको छ ? के-का लागि हामीलाई तलब दिइन्छ ? त्यो अनुभूति गरेको दिन नेपाली सेनालाई आफ्नो कर्तव्य बोध हुन्छ । (नेपालआजबाट सम्पादित अंश)
मुलुकको ४१ औं प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओली को हुन ? ओलीका केहि ऐतिहासिक तस्विरहरु सहित
पाँच पाण्डबसँग द्रौपदीले मनाएको सुहागरात यस्तो रहेछ (574)
बिहानै नीता बाथरुममा नाङ्गै नुहाउँन थाली (567)
जोसमा होस् गुमाउदै आफ्नो कपडा खोल्दै नाङ्गिएर भिडियो… (466)
दिपीकाको पुरै शरिर काँप्न थालेको थियो (458)
बोइफ्रेन्ड संग सेक्स भिडियो कल गर्दै युवती । लिक… (293)
यस्तो सपना देखेमा तपाईंको मृत्‍यु छिट्टै हुदैछ भन्ने… (157)
यी ३२ गुण जो पुरुषमा हुन्छ त्यो पुरुष महापुरुष हुन्छ… (143)
दिदीको दुःख देखेर बहिनीले भिनाजुको गर्भ बोकिन (120)
जोसमा होस् गुमाउदै आफ्नो कपडा खोल्दै नाङ्गिएर भिडियो… (1,019)
बिस्तारै नै गर्छु मैया भने मैले पनि (960)
ओई सेक्सी बहिनी, स्कर्ट माथी सार्दे न त (913)
किन हात लाई दुख दिनु हुन्छ राजु बाबु हामि हुदा हुदै (866)
अहिले फेरी लाईभ आएर अर्चना पनेरुले गरिन यस्तो,आफ्नो… (860)
पाँच पाण्डबसँग द्रौपदीले मनाएको सुहागरात यस्तो रहेछ (772)
गर्भ नरहने यौन सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ,त्यसो भए यौन… (729)
बिहानै नीता बाथरुममा नाङ्गै नुहाउँन थाली (683)